कोरोना विशेष अस्पतालमा ५ दिनभित्रै आईसीयू सेवा | Ratopati
प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको निर्देशनपछि दाङको बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा ५ दिनभित्रै आईसीयू सेवा सञ्चालन हुने अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
अस्पताल व्यवस्थापनका सदस्य सचिव डा. सर्वेश शर्माले कोरोना विशेष अस्पतालमा आईसीयू सेवा सञ्चालन गर्ने बताए । ‘वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. जितनारायण यादवको नेतृत्वमा एनेस्थेसियाका डाक्टरसहितको टिमले आगामी ५ दिनभित्रै कोरोना विशेष अस्पतालमा आईसीयू सेवा सञ्चालनमा ल्याउनमा विश्वस्त छु, आवश्यक उपकरण जडान र मोनिटर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ,’ सदस्य सचिव शर्माले भने ।
तात्कालीन प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा आईसीयू सेवाका लागि लिइएका उपकरणहरु बेलझुण्डीमा लगिएका छन् । दुवै अस्पताल प्रादेशिक भएकाले एक अस्पतालका सामान अर्को अस्पतालमा लैजान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फुकुवा गरेका थिए ।
तर बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पतालका लागि कुनै स्थायी दरबन्दी भने प्रदेश सरकारले तोक्न सकेको छैन । प्रादेशिक अस्पतालका जनशक्तिलाई काजमा लगेर कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्दा अन्य नियमित बिरामीहरुका लागि भने बरिष्ठ फिजिसियन सेवा भने कटौती भएको छ ।
तत्कालीन अस्पतालका मेसु डा. भोलाराम श्रेष्ठले अञ्चल अस्पतालमै आईसीयू सेवा सञ्चालनका लागि जनशक्ति एवं मेसिन र आवश्यक उपकरणको समेत व्यवस्थापन गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै दबाबमा एउटा आयुर्वेद क्याम्पसमा कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको थियो । तर विशेष अस्पताल बनाएसँंगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो अस्पतालमा कुनै दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेनन्, नत विशेषज्ञ चिकित्सकसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी नै ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक उपकरण र जनशक्तिका विषयमा कुनै पनि पहल नगरेकोमा तुलसीपुरबासीले गुनासो गरिरहेका छन् । तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालका आएका सामानहरु जवर्जस्तरुपमा बेलझुण्डीको म्यादी अस्पतालमा लगेर तुलसीपुरबासीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिएको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।